Oge gboo music bụ ikekwe otu n'ime ndị mbụ nkà iche nke music mkpakọrịta nwoke na nwaanyị azụ ochie ụfọdụ. Oge gboo music e kere na ghọrọ usoro si mbụ egwú music oge malite na Medieval na Renaissance eras na mgbe ahụ na-emekarị oge ịbụ Baroque, oge gboo na ihunanya eras. Oge gboo music tọrọ ntọala ọtụtụ ọhụrụ Genres nke music taa ma tọrọ ụzọ maka ọtụtụ ndị ọzọ ekwekọghị nke music. Oge gboo music nọgidere na-abụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na Genres taa na music. Lee ndị top 10 oge gboo-arọ tinyere ha music dị ka ha eras.
Part 1.Baroque Eyo-arọ
Part 2.Classical Eyo-arọ
Part 3.Romantic Eyo-arọ
1. Baroque Eyo-arọ
The Baroque oge malitere odika ná mmalite 1600 si wee na na ruo gburugburu 1750. Na oge a oge gboo music e kpamkpam-amụ na tonality ẹkenam n'ime ọtụtụ ikwọ nakwa dị ka ihe ngwá ọ bụla ibe. Opera music na-ẹkenam n'ime Baroque Eyo.
Famous-arọ nke a oge na-agụnye:
Ọ mara maka ekewetde Brandenburg Concertos
Ọ mara maka concerto maka opì-D isi.
Ọ bụkwa a maara nke ọma dere a na mpaghara. O dere, sị Handel si Messiah.
2. Oge gboo Eyo-arọ
Site afọ 1750 gburugburu 1820 na Classica Eyo malitere. A oge piano ghọrọ a kpagburuibe ngwá ọtụtụ egwú ọrụ. A oge na-enyere aka igosi ọtụtụ n'ime norms na ụkpụrụ na-ka maara na oge gboo music taa. Opera nọgidekwa na-n'ihu ịzụlite na nke a oge.
Famous Oge gboo Eyo-arọ na ha music agụnye:
Ọ na-maara nke ọma maka Symphony Nke 40
Ọ na-ike. mara maka Quintet maka ọjà.
Ọ na-ike. mara maka concerto maka Oboe na E ewepụghị Isi.
3. Ihunanya Eyo-arọ
The Ihunanya oge amalite Olee ihe enyemaka gburugburu ngwụsị afọ ndị 1800 na-mmalite afọ ndị 1900 ruo ná mmalite narị afọ nke 20. A oge gboo music e akp karịrị ya ụdị na aka ịsụ ụzọ ndị ọzọ Genres nke music. Nke a oge bụ mgbe music malitere-elekwasị anya na mmetụta uche mmetụta na okwu site abụ olu ụtọ.
Famous Ihunanya oge arọ bụ:
Ọ na-ike. mara maka Ballade maka Piano Ọ dịghị 1 na G obere.
Ọ na-ike. mara maka Hungarian Rhapsody dịghị 2 na C nkọ.
Ọ na-ike. mara maka Radetzky March.
Ọ na-maara nke ọma maka buteere na C nkọ obere.
4. Download music free na TunesGo
5 Ụzọ Download Music Free
Ụzọ na-Download Free Audio Songs
> Resource> Music> Top 10 Oge gboo-arọ na ha Famous Music